Shotguns को साथ शिकार किशोर | Martech Zone
शटगनको साथ शिकार किशोर
मङ्गलबार, जुन 24, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म यहाँ अर्को इन्डियनामा जति धेरै इन्डियानामा मैन्युफेक्चरिंगलाई कुटपिट गर्ने दोषी भएको छु। जब म निर्माण कार्यलाई लाग्छु, म कम्परेट्समा केटालाई केहि नीरस उत्पादन असेंबली लाइनमा बारम्बार काम गरिरहेको चित्रण गर्दछु। मेरो धारणा शायद आजको किशोर भन्दा फरक छैन, यद्यपि।
निर्माण र रसद रमाईलो शब्दहरू पनि छैनन्। तिनीहरू बुढो छन्। तिनीहरू बोरिंग छन्। यो कुनै पनि अन्य तस्बिरमा चित्रण गर्न गाह्रो छ! सत्य यो हो कि निर्माण र रसद कुनै पनि बोरिंग बाहेक, यद्यपि हो। विनिर्माण गतिशील, उच्च-गति स्वचालनमा बराबर हुन्छ। रसद भौगोलिक सूचना प्रणाली जस्तै मनमोहक बढ्दो टेक्नोलोजीहरूको साथ जटिल सफ्टवेयर मोडेलको बराबरी हुन्छ।
प्रश्न यो छ कि कसरी पूरै राज्यले सरकार, आमाबाबु र बच्चाहरू तपाईंको बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्दछ जब धेरै व्यक्तिहरूले वास्तवमा तपाईं के हो भनेर महसुस गर्दैनन्? हो, ब्रान्डि campaigns अभियानहरू, राजनीतिज्ञहरू र शिक्षकहरू जस्ता प्रभावकारीहरूका लागि विशिष्ट मार्केटिंगले मद्दत गर्दछ। तर कसरी तपाईं धेरै व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले केही बर्षहरूमा सयौं हजारौं रोजगारहरू भर्नु पर्छ? त्यो आज दिउँसो मलाई प्रश्न गरिरहेको थियो ... कस्तो doozy!
इण्डियाना जस्तो राज्यमा, जहाँ-बर्षे कलेजको हब्रिस बसोबास गर्दै छ (जुन हामीले चिनिन्छौं, हो?), तपाईं कसरी युवा प्रतिभालाई व्यापार कार्यक्रमहरू र २ बर्षे ट्रेड कलेजमा आकर्षित गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यो तीन गुणा प्रस्ताव हो:
सुनिश्चित गर्न प्रभावकारीहरूले तथ्या of्कको तीतो वास्तविकतालाई पहिचान गरे। Year बर्ष स्कूलमा सुरु हुने अधिकांश विद्यार्थीले उनीहरूको डिग्री पूरा गर्दैनन्। र ती मध्ये जसले आफ्नो स्नातक डिग्री क्याप्चर गर्छन् ... धेरैलाई अर्थपूर्ण रोजगार पाउन गाह्रो भइरहेको छ। एक प्रभावकर्ता जसले उनीहरूको C + विद्यार्थीलाई year बर्ष डिग्री डिग्री प्रोग्राममा कुरा गर्छन् उनीहरूले कुनै पनी पक्षमा नपर्न सक्छन्। यो निल्न गाह्रो गोली हो!
आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरूसँग उनीहरूसँग छलफल गर्ने अवसरहरूको पहिचान गर्न सुनिश्चित गर्दै। मेरोमा छोराको स्कूल उहाँ एक मध्यम विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो - त्यसैले यो सेना हरेक दिन उसको ढोका ढकढक्याउँछ। बिल IUPUI को सट्टामा सुरू भयो र अब गणित र भौतिक विज्ञानमा डबल-ऑनर मेजरमा फूलेको छ। उनले छात्रवृत्ति आकर्षित गर्न पनि थालेका छन र विश्वविद्यालयका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि शिक्षक बनाउने काम गरिरहेका छन्।
मेरो छोराको साथ मेरो कुरा यो हो - यदि हामीसँग उसको स्कूली शिक्षाको लागि स्रोत छैन भने ऊ सजिलैसँग सेनामा कुरा गर्न सक्थ्यो। म एक अनुभवी हुँ र निर्णयमा दु: ख छैन - तर मैले महसुस गरेन कि मसँग उसको उमेरमा विकल्पहरू छन्। ऊसँग थियो (र गर्छ) विकल्पहरू छन्! यदि year बर्षे डिग्री प्रोग्रामले काम नगरेको भए ऊ एक अपवादात्मक ट्रेड स्कूल सम्भावित हुने थियो (किन यति नकारात्मक लाग्छ?)। उहाँ र मलाई त्यस बारे केही थाहा थिएन, यद्यपि।
कुनै पनि मार्केटिंग प्रयासको लागि पूर्ण कुञ्जी लक्ष्य हो, आफै। यो जहाँ रबरले सडकमा हिट गर्दछ। मलाई मतलब छैन तपाईंले प्रभावकारीहरू र मार्केटलाई आमा र ड्याड्समा कत्ति राम्रो प्रभाव पार्नुहुन्छ ... यदि तपाईं बोर्डमा यी बच्चाहरू पाउँदै हुनुहुन्न भने, तपाईं असफल हुनुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई कहाँ भेट्टाउनुहुन्छ? फेसबुक? ट्विटर? मोबाइल? भिडियो खेलहरू? स्कुलमा? युवा समूहहरू?
हो, तपाईं ती जताततै फेला पार्नुहुन्छ। हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीहरूको पहिचान बनाउनको लागि शिक्षा दिन राम्रो काम गरेका छौं, फरक सोच्नुहोस्, खुशी पाउनुहोस् ... त्यसोभए उनीहरू के गरिरहेका छन्। तपाईं मेरो छोरी पाउन सक्नुहुन्छ चित्रहरु लिदै र तिनीहरूलाई साझा। केटीले पनि उनको फ्लिप क्यामेराको साथ भिडियोहरू परीक्षण गर्दैछ। र अवश्य पनि, तत्काल मेसेन्जर र उनको सेल फोनमा। एक पटक केहि समय पछि, उनी आफ्ना साथीहरूसँग भेला भई खेल्नेछिन् रक ब्यान्ड.
My छोरा ब्लगहरु (sporadically), Facebook मा छ र MySpace मा उसका अन्य संगीतकार साथीहरूसँग मिल्छ। त्यस बाहेक, तपाईं उसलाई आफ्नो मनपर्ने ह्याoutsआउट्समा फेला पार्नुहुनेछ, बीन कप (उसले मलाई अook्गाल्यो) र वाफल हाउस... हो, वाफल हाउस।
आजका किशोर-किशोरीसँग छनौट छन र आफ्नै व्यक्तित्वको लागि संघर्ष गर्दैछ। मेरो छोरा र छोरीको साथीहरु धेरै धेरै, यदि कुनै हो, विद्रोह गरिरहेको छ जस्तै हामी जवान थियौं जब। तिनीहरू बिग्रिएका छन्। उनीहरूसँग खेलौना छ। तिनीहरूसँग इन्टरनेट छ। तिनीहरू एक अर्कामा छन्। उनीहरू ब्राण्डहरू मन पराउँदैनन् वा ब्यबस्थित छन्। तिनीहरूलाई हरियो मन पर्छ। तिनीहरू पृथ्वी बचत गर्न चाहन्छन् ... जे भए पनि।
आजको युवावस्थामा ट्याप गर्न यटेरियरको केहि राम्ररी डिजाइन गरिएको घुसाउने विधि भन्दा बढी लिन्छ। मलाई याद छ जब सबै नाइकले गर्नु पर्‍यो बिक्रीमा हिट गर्नका लागि चलचित्रमा उनीहरूको नयाँ hightops चलाउन। आजकल, बच्चाहरू स्नीकरको जोडी फेला पार्न चाहन्छन् जुन कसैसँग छैन।
यदि तपाईं किशोर हन्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो शटगन ल्याउनुहोस्। प्रभुत्व जमाउँदै गुगल, Youtube, फ्लिकर, फेसबुक (अलि धेरै पुरानो हुन सक्छ), माइस्पेस, संगीत दृश्य, मल, भिडियो खेलहरू, सेल फोन र स्थानीय कफि शप वा वाफल हाउस एक राम्रो सुरुवात हुन सक्छ!
मेरो सल्लाह यो छ कि किशोरका लागि ठाउँ प्रदान गर्न सजिलो हुन सक्छ be बरु उनीहरू जानु भन्दा हो। मलाई थाहा छ हाम्रा बच्चाहरू क्षेत्रीय र चर्च युवा समूहका कति कदरकारी थिए जहाँ उनीहरू ह्या hang्ग आउट गर्न, कुराकानी गर्न, भिडियो गेमहरू खेल्न, र अझै उत्कृष्ट सन्देश भन्न सकिन्छ। तिनीहरू सँधै सन्देशको लागि आएका थिएनन्, तर तिनीहरू एक अर्काको लागि आएका थिए। त्यो स्थान ईंट र मोर्टार स्थापना हुन आवश्यक छैन, यो अनलाइन उत्तम ठाउँ हुन सक्छ।
तिम्रो विचार? चित्र र किशोर मार्केटिंगमा एक उत्कृष्ट पोस्ट परिप्रेक्ष ब्लगमा फेला पर्‍यो।
टैग: एनिमेटेड फेविकॉनसम्मेलन सफ्टवेयरसंकुचितईमेल सामग्रीफ्याफिकनफेभिकन जेनरेटरgetomeeting विकल्पबिक्री सफ्टवेयरwebex विकल्पWordPress
सामाजिक मिडिया र व्यापार रणनीति
सिस्को I-पुरस्कार फाइनलमा अपडेट
जुन २,, २०१ बिहान :24:२२ बिहान
राम्रो पोष्ट! मलाई सोच्नको लागि अझ बढी दिनुहुन्छ, मेरा दुई बच्चाहरू किशोरावस्था हुनु अघि मैले धेरै वर्षहरू पाइसकेको छु, तर मलाई थाहा छ यो जान्नु अघि नै यो उडानमा जान्छ। मलाई लाग्छ कि हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब चीजहरू मध्ये एक हो केटाकेटीलाई कलेजमा धक्का दिनु जब उनीहरू वास्तवमै यसको लागि तयार हुँदैनन्। त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन्: सैन्य, ट्रेड, सेवा संगठनहरू।
साथै, सबैजना अफिस वा प्रयोगशालामा दिनभरिन हुन चाहँदैन। त्यहाँ धेरै केटाकेटीहरू छन् जो विगत १ for बर्षदेखि डेस्कमा जडिएका छन्, जो टाइपिंग बाहेक अरू केहि गर्दै छन्। निर्माण सी विद्यार्थीहरूको लागि मात्र होईन। मैले व्यापारका काममा केही निपुण व्यक्तिहरूलाई चिनेको छु जो अपराधी हुन्छन् र शारीरिक रूपमा के गर्दै छन्।
यसले मलाई अफिस स्पेसको बारेमा सोच्न बाध्य तुल्यायो जहाँ अन्ततः पत्रुस क्वाइकलमा हुनुको सट्टा सफा चालक दलमा काम गर्न पाउँदा खुसी भए।
तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ र मलाई आशा छ कि म यो भन्दै आएको छैन कि यी रोजगारहरू औसत विद्यार्थीहरूका लागि थिए। मेरो कुरा ठीक विपरित हो - यी रोजगारहरू दुबै उत्साहजनक, प्राविधिक रूपमा उन्नत छन्, धेरै राम्रो भुक्तानी गर्ने क्यारियरको लागि नेतृत्व र4बर्ष डिग्री आवश्यक छैन। तिनीहरू मध्ये केहीलाई २ बर्ष पनि चाहिदैन।
यो वास्तवमै केवल एक उपेक्षित उद्योग हो। सबैजना सोच्छन् कि सफल हुन तपाईलाई आजकल स्नातक चाहिन्छ। जबकि म भन्छु कि यो एक राम्रो 'बीमा नीति' हो यो एक चुनौतीपूर्ण र इनामदायी क्यारियर चाहने युवा व्यक्तिको लागि सबैभन्दा रमाइलो र फलदायी मार्ग नहुन सक्छ!
तपाईको विचारहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
PS: म अफिसलाई माया गर्छु!
जुन 25, 2008 मा 7: 35 PM
उत्कृष्ट पोस्ट डग।
एक "सहस्राब्दी" हुनु म Def। तपाईले यहाँ भनेका सबै कुरासँग सहमत हुनुहोस्।
उनीहरू कहाँ छन् भेट्नुहोस्, र शटगनसँग कोकको एक लाइन लिनुहोस्। तपाईलाई यो चाहिन्छ।
पीसी लोड अक्षर के # $ @ # मतलब भनेको हो?